peacefeature 1 Archives - Page 71 of 71 - Peacepokhara.com
पेजगृहपृष्ठ»समाचार विधा (पेज 71)
कृष्ण दवाडी ६ कार्तिक २०७४, सोमबार ०९:००0हेरिएको
काठमाडौं,६ कार्तिक मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । आज बिहान बसेको बैठकले सचिव रेग्मीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको हो । उमेर हदका कारण मुख्यसचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले अवकाश पाएपछि सरकारले सचिवहरुको बरियताक्रममा तेश्रो स्थानमा रहेका रेग्मीलाई नियुक्त गरेको हो । क्षेत्री भन्दा अगाडिका ... थप पढ्नुहोस्
पोखराको लामाचौरबाट मोटरसाइकल सहित नालीमा बगेका ब्यक्ति भेटिएनन्
पिस पोखरा ५ कार्तिक २०७४, आईतवार १५:००0हेरिएको
पोखरा ५ कार्तिक । शनिबार राति परेको मुसलधारे वर्षापछि नालीमा आएको भेलमा परेर पोखरामा एक जना बेपत्ता भएका छन् । पोखराको लामाचौरमा मोटरसाइकल सहित नालीमा खसेर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का पिजन पुन बेपत्ता भएका हुन् । शनिवार रातीदेखि बेपत्ता उनलाई आइतबार दिनभर खोजी गर्दा पनि भेट्टाउन नसकिएको ... थप पढ्नुहोस्
पिस पोखरा ४ कार्तिक २०७४, शनिबार १२:००0हेरिएको
पोखरा ४ कात्तिक । तिहारको अन्तिम दिन पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले शनिवार आयोजना गरेको ११ औं भाइटिका महोत्सव मा १३ देशका ३५ पर्यटकले टिका ग्रहण गरेका छन् । भाइटिका महोत्सवको निरन्तरतासँगै पछिल्ला वर्षहरुका पर्यटकहरु दोहो-याएर समेत टिका लगाउन पोखरा आउन थालेका छन् । पोखराको लेकसाइड स्थित बटरफ्लाई चाइल्ड केयर सेन्टरमा ... थप पढ्नुहोस्
तिहारको अन्तिम दिन आज भाइटीका, उत्तम साइत विहान ११:५१ मा
पिस पोखरा ४ कार्तिक २०७४, शनिबार ००:००0हेरिएको
पोखरा ४ कार्तिक । नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहारको अन्तिम दिन आज भाइटीका, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले एकअर्कालाई टीका लगाइदिएर मनाउँदैछन् । भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५१ मिनेटमा रहेको नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । समितिका अध्ययक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले भने, ‘उत्तम साइत खोज्नेहरुका लागि ११ः५१ मा ... थप पढ्नुहोस्
नेपाल संवत् ११३८ आजबाट सुरू, साँझ म्हः पूजा
पिस पोखरा ३ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०२:००0हेरिएको
पोखरा ३ कात्तिक । नेपाल संवत् ११३८ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस पात्रोलाई नेवार समुदायले मान्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय विभूति शंखाधर साख्वाले विसं ९३७ (इ सं ८८०) मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल संवतको शुरुवात गराएका थिए । नेपाल संवतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय संवतको ... थप पढ्नुहोस्
पिस पोखरा २ कार्तिक २०७४, बिहीबार १२:००0हेरिएको
पोखरा २ कार्तिक । पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको स्मार्ट ट्राफिक आइल्याण्ड ट्रकको ठक्करले ढलेको छ । विहिवार विहान ९ बजे ना १ क ३७४३ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिदा आइल्याण्ड भत्किएको हो । चिप्लेढुंगाबाट नयाँबजार तर्फ जाने क्रममा चोकमा रहेको आइल्याण्डमा ट्रकले ठक्कर दिएको थियो । आइल्याण्ड ढलेपनि कुनै मानविय क्षती भने ... थप पढ्नुहोस्
तिहारको तेस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा सहित दीपावली गरेर मनाइँदै
पिस पोखरा २ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०२:००0हेरिएको
पोखरा २ कार्तिक । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज साँझ ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा पर्व मनाइँदैछ । सफासुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफा सुग्घर र लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ ... थप पढ्नुहोस्
पृथ्बीचोकमा भत्काएको आइल्याण्ड सहित सालिक ठड्याउने काम पुन ः सुरु
पिस पोखरा ३१ आश्विन २०७४, मंगलवार १३:००0हेरिएको
पोखरा ३१ असोज । पोखराको पृथ्बीचोकमा रहेको लखन थापाको सालिक सहित आइल्याण्ड भत्काएको नगरपालिकाले सोहि स्थानमा पुन सालिक ठड्याउने काम सुरु गरेको छ । गत असोज ८ गते राती सालिक सहितको आइल्याण्ड भत्काएपछि भएको बिरोधका कारण असन्तुष्ट पक्षसँग पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले १० बुदे सहमति गरेको थियो । ... थप पढ्नुहोस्
अमरसिंहचोकको आइल्याण्ड पनि भत्काइयो (भिडियो सहित )
पिस पोखरा ३० आश्विन २०७४, सोमबार १४:००0हेरिएको
पोखरा ३० असोज । पोखराका विभिन्न चोकमा रहेका भत्ता आइल्याण्डको कारण ट्राफिक ब्यवस्थापनमा जटिलता थपिदै गएपछि एक पछि अर्को गर्दै आइल्याण्ड भत्काउन थालिएको छ । पोखराको मूखय पृथ्बीचोक स्थित आइल्याण्ड भत्काएको केहि दिनमै अर्को चोक अमरसिंहमा रहेको आइल्याण्ड भत्काइएको छ । सोमवार साझ अमरसिंहचोकको आइल्याण्ड भत्काइएको हो । पृथ्बीचोकको आइल्याण्ड ... थप पढ्नुहोस्
अमेरिकाको बुर्लिङटनमा भुटानी शरणार्थीले गरे श्रीमतीको बिभत्स हत्या (भिडियो सहित )
पिस पोखरा २९ आश्विन २०७४, आईतवार ०३:००0हेरिएको
अमेरिका । अमेरिकामा बस्दै आएका एक नेपाली भाषी भुटानीले श्रीमतीको बिभत्स हत्या गरेका छन् । अमेरिकाको बुर्लिङटनमा बस्दै आएका ३४ बर्षीय आईत गुरुङले श्रीमतीको हत्या गरेका हुन् । उनले स्थानीय समय अनुसार विहिवार दिउसो साढे २ बजे आफ्नै घरमा मासु काट्ने खुडाले हानेर ३२ बर्षीय श्रीमती योगेश्वरी खड्काको हत्या गरेको ... थप पढ्नुहोस्